एकचोटि घुमौं घलेगाउँ, घनपोखरा र भुजुङ (फोटो फिचर) - नागरिक रैबार
एकचोटि घुमौं घलेगाउँ, घनपोखरा र भुजुङ (फोटो फिचर)
फोक्सुन्डो ताल: साँच्चै कमाल
‘गणतन्त्रको यात्रा’ विमोचन गर्दै नागरिक अगुवाले भने- गणतन्त्र जान सक्छ
भीम कमरेड ठीक ठाउँमा उभिएपछि प्रेम आलेहरु गएर केही फरक पर्दैन – नेता थापा
नेपाली काँग्रेस बाजुरामा देउवा पक्षकै हालीमुहाली
काँग्रेस बाजुराको सह-सचिवमा वडा अध्यक्ष रावलको दावी
महान्यायाधिवक्तामा बाजुराका खम्मबहादुर खाती नियुक्त
काँग्रेस बाजुराद्धारा एतिहासिक फैसलाको स्वागत
बालोन डे ओरका ५ दाबेदार
जिन्दगीको के भरोसा !
जिन्दगीको के भरोसा, यो त सानो खेलौना हो दुई आँखामा एकमा हाँसो, अर्कोमा रुवाइ छ …। लोकप्रिय गायक कर्णदासको यो गीत ल्यापटपमा लगातार बजिरहेको छ । गीत जस्तै छ जिन्दगीको परिभाषा पनि । सरल भाषामा भन्नुपर्दा वा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा जिन्दगीको यकिन छैन, कहाँ, कहिले के हुने हो भरोसा छैन । विज्ञापन ‘के हो जिन्दगीको परिभाषा […]
ओखलढुङ्गा– युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको ११०औँ जन्मजयन्ती आज मनाइँदै छ । विसं १९६९ साल जेठ ९ गते आजकै दिन ओखलढुङ्गामा उनको जन्म भएको थियो । यस वर्ष पनि कोरोना कहरकाबीच उनको सम्झनामा गरिँदैछ । सोही अवसरमा ‘मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा’ कविताको भिडियो आज सार्वजनिक गरिएको छ । यसमा युगकविको रचना एवं स्वरसम्राट नारायण गोपालको स्वर छ । […]
उसले तलब थाप्नेबित्तिकै रकमको जोड-घटाउ गर्न थाल्यो । चिया पसलको उधारो दुई हजार । मोबाइल खर्च एक हजार । आगामी महिनाको खाजा खर्च तीन हजार । बुट फाटेको छ, किन्नको लागि दुई हजार । युनिफर्म खुईलिएर सेतै भएको छ । हाकिमबाट तीन पुस्तालाई पुग्ने गाली खाइसकिएको छ । स्केलमा पाउनुपर्ने पोशाक वर्षौं बित्दा पनि पाइँदैन […]
कथा : बा, तपाईंको मोबाइल चल्यो !
‘हेर त बाबु, यो मोबाइल एकपटक के भएको रहेछ ?’ शिरमा अलि पुरानो ढाका टोपी, काँधमा गलबन्दी भिरेका अधबैंसे पुरुषले सोधे । मोबाइल पसलमै मोबाइल मर्मत गर्ने पनि सुबिधा छ । एकजना २०/२२ वर्षे केटा र एकजना केटी पसलको काउन्टरमा अग्लो स्टुलमा बसेर टाउको झुकाउँदै आ-आफ्नै मोबाइलमा व्यस्त थिए । पसलको दाहिने कुनामा सिसाले बारेर […]
महाकाली तटमा वीरताका तीन गन्तव्य
निमेन्द्र शाही/ बाजुरा ७ फागुन। सुदूरपश्चिमको महाकाली नदी आसपास घुम्ने पर्यटकका लागि तीन ऐतिहासिक र वीरहरूको गाथा स्मरण गर्ने गन्तव्य छन् । यस क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक अमरगढी किल्ला, सहिद दशरथ चन्दको जन्मघर र किसान नेता भीमदत्त पन्तको बासस्थानले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछन् । सुदूरपश्चिमको डँडेलधुरामा अमरगढी किल्ला छ । ऐतिहासिक अमरगढी किल्ला रहेको डँडेलधुरा राजनीतिक गतिविधिले पनि चर्चामा छ […]
हामी त फुट्यौँ कमरेड !
–हेमराज ढकाल ‘सुमन’ हामी त फुट्यौँ कमरेड धुम्बाराही र पेरिसडाँडा नजाने गरी एकअर्काको मुहार नहेर्ने गरी भुलेर ती समाजवादका सपना सहिदका रगत र बलिदानहरु हामी फुट्यौँ कमरेड । मार्क्स, माओ र लेलिनका सिद्धान्त पुप्पलाल, मदन र मनमोहनका विचार यी सबैलाई टोकरी हालेर फेरि दर्शन र सिद्धान्तभन्दा पनि हामीलाई पद, शक्ति अनि पैसा ठूलो भो त्यसैले […]
माधव नेपाल पक्षको पहिलो दिनको बैठक सकियो, भोलि पुनः बस्ने
ओलीले गल्ती स्वीकारेर आत्मआलोचना गरेमात्र पार्टी एकता हुन्छ: नेपाल
ओलीको नीति उल्ट्याउँदै देउवा : यसरी हुँदैछ ‘कोर्ष करेक्सन’
बूढानीलकण्ठ स्कुलमा निःशुल्क अध्ययनका लागि आवेदन खुला (सूचनासहित)
भरियामार्फत नेपाल भित्र्याइएको ३७ लाखको सुनसहित २ पक्राउ
दबाबै दबाबमा देउवा
संक्रमित घट्दै जाने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान